ne admin pane 2021-06-18
Nzira yekugadzira manyowa? Organic tsvina composting inodikanwa uye isingadzivisike kana dzimba dzichigadzira yako fetiraiza pamba. Kuisa mupfudze inzira inoshanda uye ine hupfumi mukutarisira marara emombe. Kune maviri marudzi enzira dzekuisa manyowa anowanikwa mune yakagadziriswa organic fetiraiza pr ...
Tanga purojekiti yako yekugadzira fetiraiza
Ruzivo kwete ...
Mufudze wemakwai kuO Organic Fertilizer Kugadzira Tekinoroji
Kune mapurazi mazhinji emakwai kuAustralia, New Zealand, America, England, France, Canada nedzimwe nyika zhinji. Ehezve, inoburitsa yakawanda yakawanda yemombe manyowa. Izvo zvakanaka zvigadzirwa zvekugadzirwa kwe organic fetiraiza. Sei? Hunhu hwemanyowa emakwai ndiyo yekutanga mune yekuchengeta zvipfuyo. ...
Sei mupfudze wehuku uchifanira kunyatsoora usati washandisa?
Chekutanga, manyowa ehuku mbishi haana kuenzana nefotereza yehupenyu. Organic fetiraiza inoreva mashanga, keke, mupfudze wezvipfuyo, zvisara zvehowa uye zvimwe zviwanikwa kuburikidza nekuora, kuvirisa nekugadzirisa kunoitwa fetereza. Manyowa emhuka ingori imwe yeiyo mbishi mater ...
Kuiswa uye kugadziriswa kweChain Plate Compost Turner
Chain ndiro kompositi Turner inomhanyisa iyo yekuora maitiro ehupenyu marara. Zviri nyore kushanda uye zvine hunyanzvi hwakakura, saka ichi chigadzirwa chemanyowa chinoshandiswa zvakanyanya kwete chete mu organic fekitori yekugadzira chirimwa, asiwo mupurazi composting. Kuongorora usati waita bvunzo kumhanya ◇ ...
UNOGONA SEI KUTI UITE Sarudzo YEMAHARA FERERIKI YEMAHARA
Ongororo ye organic fetiraiza mbishi Zvinhu nekuda kwehuwandu hwakawanda hwemakemikari manyowa ari kuiswa munguva yakati rebei, iyo organic chinhu chiri muvhu inoderera pasina iyo neutralization ye organic fetiraiza. Chinangwa chikuru cheiyo organic fetiraiza chirimwa kuburitsa organic organic ...
Mamiriro ekudzora kwe organic organic fetiraiza, mukuita, iko kubatana kwepanyama uye kwehupenyu zvivakwa mukuita kwe compost murwi. Kune rimwe divi, mamiriro ekudzora anopindirana uye akabatanidzwa. Kune rimwe divi, mhepo dzakasiyana dzemhepo dzakasanganiswa pamwechete, nekuda kwekudonha ...
Munguva yekushambadzira kwekugadzirwa kwefetiraiza manyowa, pane chakakosha michina inoita chinhanho chakakosha mukusvina manyowa yekuvirisa nhanho - compost Turner muchina, taizozivisa ruzivo rwekutanga nezve compost Turner, kusanganisira mashandiro ayo, mhando uye nzira yekusarudza a. ..
Kunyange hazvo kurima kwehuku kwave kuri kuwedzera mukuzivikanwa mu Africa mumakore apfuura, chave chiri chiito chidiki-chidiki. Mumakore mashoma apfuura, zvakadaro, chazove chiitiko chakakomba, nevazhinji vechidiki vezvemabhizimusi vachinongedzera purofiti inokwezva yavanopa. Huku huwandu hwevanhu ve ...
Chikafu chemarara chave chichiwedzera sezvo huwandu hwenyika hwakura uye maguta akura muhukuru. Mamirioni ematani echikafu anokandwa mumarara akapoterera pasirese gore rega. Zvinenge makumi matatu kubva muzana zvezvibereko zvepasi rose, miriwo, zviyo, nyama uye zvakapakurwa chikafu zvinoraswa gore rega rega ....
Kurapa zvine musoro uye kushandiswa kwakanaka kwemanyowa ezvipfuyo kunogona kuunza mari zhinji kune vazhinji varimi, asiwo kusimudzira kusimudzira kwemaindasitiri avo. Biological organic fetiraiza rudzi rwe fetiraiza nemabasa e microbial fetiraiza uye organic f ...
Sucrose inoverengera 65-70% yeshuga inogadzirwa pasirese. Iyo yekugadzira nzira inoda yakawanda yemhepo uye magetsi, uye inogadzira akawanda masara pamatanho akasiyana ekugadzira panguva imwe chete. Sucrose Kugadzira Chinzvimbo Munyika Kune nyika dzinopfuura zana ...